#अल्पसंख्यक जाति# क्वी चौ प्रान्तीय पाउ चि म्याउ तथा यी जातीय बस्तीमा कृषि तथा पर्यटनको विकास 2_china.com
#अल्पसंख्यक जाति# क्वी चौ प्रान्तीय पाउ चि म्याउ तथा यी जातीय बस्तीमा कृषि तथा पर्यटनको विकास 2
लु च्या चाइ गाउँमा स्लेटमार्फत् बनाइएको बाटोमा घुम्दा ताजा तथा शीतल वायुको श्वासप्रश्वास गर्नुका साथै वनस्पतिमा किरा र चराको आवाज पनि सुनेर निकै आनन्द लाग्छ। त्यसैले यात्रुहरूले स्थानीय जीवनलाई एकदमै मन पराउँछन्।
यस्तो आनन्ददायी जीवनको निर्माण गर्न सजिलो होइन। धेरै गाउँलेको घरको ढोकामा फान चौ शहरीय गरिबी निवारण गर्न सहयोगी अधिकारीको कार्ड झुण्डिएको छ। यी कार्डमा गरिब परिवार र सम्बन्धित सहयोगी अधिकारीको ठोस सूचना र सहयोग कदमबारे लेखिएको छ। यी अधिकारीहरूले हरेक गाउँमा स्थानीय अधिकारीसँगै हरेक गाउँलेको घरको भ्रमण गरी गरिबी निवारण नीतिबारे व्याख्या गर्नुका साथै सक्दो प्रयासमा सहयोग दिने गर्दछन्।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीअन्तर्गत फान चौ शहरीय पाउ ची बस्ती कमिटीका महासचिव ली चिनफिङले सन् २०१५ देखि पाउ ची बस्तीमा कार्य सुरू गर्नुभयो। केही वर्षयता उहाँले बस्तीका सबै क्षेत्रको भ्रमण गरेर बस्तीका हरेक गाउँको ठोस अवस्थाबारेमा जानकारी राख्नुभयो। गरिबी निवारण युद्धमा विजय हासिल गर्न सकिने उहाँलाई निकै ठूलो विश्वास छ। उहाँले यसरी भन्नुभयो-
“हाम्रो विचारमा गरिबी निवारण हावाजस्तै चरणवद्ध होइन। हामीले त्यसपछिको विकासको विचार गर्नुपर्छ। गरिबी निवारणको क्रममा हामीले कृषि योजना र खेतीपातीमार्फत् समस्याको समाधान गर्छौं। तर त्यसपछि कसरी विकास गर्ने, कसरी धनी बन्ने र कसरी विपन्न हुने, गाउँबस्तीको पुनरूत्थानमा हामीले कसरी भाग लिने? दीर्घकालबाट कृषि तथा पर्यटन कसरी मिलाउने? यी समस्याको विचार हामीले गर्छौं।”